युरोपमा बनेको सि.जी. ब्राण्डका डिसवासर र वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > युरोपमा बनेको सि.जी. ब्राण्डका डिसवासर र वासिङ मेसिन नेपाली बजारमा
काठमाडाैं । सि.जीले हालै युरोपमा डिजाईन र उत्पादन गरीएकाे वासिङ मेसिन र डिसवासर नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
युरोपमा उत्पादन भएका कारण यी सामाग्रीहरुमा विभिन्न किसिमका विशेषताका साथै निकै नै आकर्षक स्वरुप पनि रहेका कम्पनीले जनाएकाे छ ।
तेस्तै अर्को युरोपमा डिजाईन र उत्पादन गरिएका डिसवासरहरु बजारमा १२ प्लेस सेटिङ र १५ प्लेस सेटिङमा उपलब्ध रहेकाे छ । तपाईंले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई खरिद गर्न सक्नेछन् । यसमा डिस्प्ले स्किृन तथा टच स्किृन भएका हुनाले तपाईंलाई यी डिसवासरहरु प्रयोग गर्न एकदमै सजिलो हुने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
यसमा विभिन्न वासिङ प्रोगामहरु पनि रहेका छन् । जसलाई तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरि आफ्नो भाँडाहरुलाई सफा गर्न सक्नुहुनेछ ।
वि.एल.डि.सि. टेक्नोलोजि वा हाईड्रो पावर पनि यसको विशेषता रहेको छ जसको मद्दतले तपाईंको घरको पानी, मोटरको इनर्जी र समयको बचत गर्दछ । डिउल प्रो वासको मद्दतले तपाईको भाँडालाई